Kitapom-basy - toy ny tavy sy haingon-tarehy mahafatifaty miaraka amin'ny spikelet
Anatin'ireo karazana horita vavy vavy, ny zozoro amin'ny raki-tsoratra dia heverina ho iray amin'ireo malaza indrindra. Ny fisehoan-javatra tamin'ny andro fahiny, dia mbola tsy mahavery ny maha-zava-dehibe azy ary amin'ny fotoana rehetra dia toa lamaody sy mody. Mora kokoa ny misolo an'io akanjo io toy izay mety amin'ny voalohany, nefa tsy mila fanampiana amin'ny tompony.
Scythe spike - ny fomba hanasarahana?
Matetika, afaka mahafeno ny dikan-tsoratry ny tsipika ianao - ny tsotra indrindra amin'ny fampisehoana, fa raha toa ianao ka tia amin'ny fomba rehetra azo ovaina. Ny fanombohana amin'ny famoronana horita-trondro dia notoroina hanomboka amin'ny karazan-trondro toy izany, ary amin'ny voalohany dia tsara kokoa ny manandrana tsy amin'ny tenanao, fa amin'ny olona hafa na amin'ny mannequin. Alohan'ny handrodana ny kodiarana, tohero ny fomba fanaovana an'ity volo ity, dia tsara ny mahafantatra tsara ny tsiambaratelo sasany izay hanampy amin'ny fanamorana ny dingana sy ny vokatra tsara. Tadidio izao manaraka izao:
Ny satroka malefaka sy kanto dia avy amin'ny kofehy malefaka, ary avy amin'ny lehibe - ny telo dimanjolo.
Tsy dia miondrika ny hoditra, afaka mamafy aloha amin'ny rano izy ireo na mampihatra vokatra vitsivitsy (mousse, gel).
Mba hahatonga ny fitaratra tsy voahodina, dia ilaina ny manavaka ny kofehy mitovy ny hateviny.
Mba hisorohana ny endriky ny "roosters", ny kofehy tsirairay dia tsy maintsy fehezina sy mihorakoraka.
Vovobony kely dia mora entina amin'ny alàlan'ny tavy amin'ny nify madinika.
Ny aretin-koditra mampikorontana ny dingana
Maka 10-20 minitra eo ho eo ny manao ny volo voafantina, miankina amin'ny halavan'ny volo, ny tanjany sy ny rafitra. Mandra-pahatongan'ny fotoana dia sarotra ny mamaritra ny sakan'ny tsara indrindra sy ny fahasamihafana amin'ny saka, saingy efa azo atao amin'ny ezaka fanindroany fahatelo izany. Eritrereto ny fomba hamoronana tsokan-tsokosoko tsikelikely, miaraka amin'ny famaritana sy fanoharana amin'ny antsipiriany ny dingana tsirairay:
Mamihina ny volony ary manamboatra azy indray, manasaraka lava be eo afovoany eo am-pototry ny handrina na eo amin'ny satroboninahitra.
Zarao ny ampahany voafantina amin'ny volon'olon-droa mitovy, ary atombohy aloha ny zana-pifaneraserana eo an-tampony ary avy eo ny ilany havia miaraka amin'ny boribory eo afovoany (toy ny eo amin'ny fatoran'ny ordinatera tsotra). Azo atao amin'ny tànana havia ireo fanodikodinana ireo.
Tohizo ny tebiteby amin'ny fampidirana volo vitsy amin'ny volo efa voafantina miaraka amin'ny tapany mifandraika amin'ny loha ary mamakivaky azy ireo amin'ny tara-kavoana.
Apetaho eo an-kavanana ny andry eo an-kavanana, ary tazony amin'ny tananao havanana ny kofehy.
Ataovy toy ny andininy faha-3, ampio ny ampahany amin'ny volo mankany amin'ny tadin'ny sisiny havia amin'ny havia havia.
Mba hahatonga ny tady havia hivoaka eo afovoany, afindrao ny ivon'ny fanorenana mankany amin'ny ilany havia.
Avereno atao ny fihetsika nataon'izy ireo ary ento ny taolana mandra-pahatapitry ny fitomboan'ny volo, alamino izany miaraka amin'ny fingotra fingotra, mamela ny rambony na ny tavin-koditra avy amin'ny lozam-pifamoivoizana (olon-tsotra, rambon-trondro).
Tsorakazo bobaka mifanohitra amin'izany
Afaka manandrana mampivelatra ny endrikao amin'ny endriny hafa amin'ny endriny mahafatifaty ianao rehefa manamboatra akanjom-pasika amin'ny fomba nentim-paharazana. Tena mahaliana sy mahomby ny mamboatra, noforonina amina lamandy, toy ny hoe ao anaty. Amin'io tranga io, ny volon-koditra dia mihodina amin'ny endriny, toy ny hoe vita amin'ny tendrony ka hatrany ambony. Ny algorithm ankapobeny amin'ny famoronana dia mitovitovy amin'ny fanatontosana ny spike telo-spike malaza: ny fisarahana sy ny fanodinana ny fiantohana dia mitovy, fa ny fiovana ny fikorontanan'ny mouvement - ny tadiny tery dia tsy napetraka ambony, fa avy amin'ny afovoany.
Spike - kotrokely Frantsay
Inoana fa nihanihany ny sofin'ny Ejipsiana fahiny, ary tany Frantsa no voalohany nametrahana io fomba io ny Frantsay. Noho izany, ny raki-tsoratra dia antsoina koa hoe scytha frantsay . Ilaina ny mampiditra fa ity volo ity dia universal, mety ho an'ny vehivavy amin'ny vanim-potoana rehetra ary amin'ny fotoana samihafa. Ankoatr'izay, ny taolam-paty Frantsay dia afaka tanterahana tsy vitan'ny lava, fa amin'ny volo midadasika ihany koa. Koa satria sarotra ny misolo-tena ho an'ny tenany ho an'ny ankizivavy sasany, dia soso-kevitra ny hanangom-bokatra voalohany ny volo amin'ny lavaka be.
Aza avela handeha tsy ho voamarikao amin'ny fiovaovan'ny toho-tantely ny kavina, ao amin'ny tsangantsanganana izay tsy mifangaro ny tady. Tena mahafinaritra sy mahavariana toy ny volon-koditra amin'ny volon'ny volo, ary rehefa mamorona tebiteby lava amin'ny lava lava tsy misy fahasamihafana, dia manampy amin'ny famoronana ny fiantraikan'ny hidiran'ny rivotra. Noho izany, ny zavatra rehetra dia tsy maintsy takiana aorian'ny fampiasana ny fampiasana teknika tsotra, mifototra amin'ny fitohitohizana ny tady eo amin'ny andaniny, manomboka amin'ny farany ambany. Mba hamahana ny vokatra dia azonao atao ny mampiasa tsy hita maso sy varnish.
Ity karazan-kofidina ity dia mitaky fotoana maharitra, fa ny vokatra dia manamarina ny ezaka rehetra. Mba hahatonga ny rambon-trondro iray ho tadiavina amin'ny volo madinika, ary raha manambony sy manambony izy ireo dia tokony hampiasaina amin'ny vy aloha. Rehefa manenina amin'ny lafiny roa amin'ny volony, dia mila mifidy avy any amin'ny faritra tsirairay amin'ny fomba mahitsy ianao ary mandalo azy ireo. Toe-mandidy: tokony ho matevina sy mitovy ny hateviny.
Na dia somary misangisangy sy mibaribary aza dia mijery loko roa, izay azo havaozina eo amin'ny soroka na miara-mitambatra. Rehefa mamorona fehin-kiraro toy izany, dia zaraina roa ny volony voalohany, ary avy eo dia mitovitovy mitovy amin'ny trondro iray ny kofehy. 2 kofehy marevaka - varotra ny tavy, izay hameno tsara ny sary mampihomehy sy mampihetsi-po.
Ny voka-dratsin'ny volon'ny fotsy - dia midika ho fanatsarana volo sy safidy volo
Root of Air for Hair
Hairy ho an'ny volom-biby volo
Krizy ranom-bary ho an'ny volo
Ny fihenan'ny taovam-piterahana taorian'ny fiterahana - ahoana no hampiato ny fahaverezan'ny curls?
Tapakila ho an'ny efitrano
Jane Fonda dia mampiseho ny fomba ahafahan'ny vehivavy 78
Famantarana ny schizophrenia amin'ny lehilahy - fihetsika
Better tapakila tsy misy lamba na vina?
Fambolena kôkômbra eny an-kalamanjana
Vermox ho an'ny ankizy
Ahoana no hikolokolo azy ao anaty vilany?
Firy ny kaloria amin'ny ovy?
Tilda ilay anjely
Tetezana any Mesa
Kalandrieran'ny volana jona
Tortlets miaraka amin'ny famenoana - fomba fikarakarana sakafo goavam-be ao amin'ny latabatra fety
Ahoana ny fomba hialana amin'ny zHirovikov amin'ny vatana?
Ahoana no hanazavana ny hoditry ny tarehy?